Forum serasera malagasy Fandrafetana abidia ho an’ny teny malagasy (1) - Dinika forum.serasera.org
Fandrafetana abidia ho an’ny teny malagasy (1)
Fitohizan'ny hafatra : 1- raha ny nianaranay aloha dia tora-droa no izy f...
sitlo - 04/03/2014 22:33
1- raha ny nianaranay aloha dia tora-droa no izy fa tsy toradroa
Ary ekeko fa misy ny lalàna hoe rehefa zary anarana ny teny iray dia tsy voatery haraka ny fitsipika intsony. Fa ireo lisitry ny teny zary anarana no tsy dia hita loatra ka lasa miteraka fifamaliana hoe efa anarana io na tsia.
2- raha ny filazanao ny resaka siantifika indray ka ilazanao fa tsy mitombina itsy sy iroa satria tamin'izao taona dia izao. Dia aoka ampahatsiahiviko kely fa ny teny frantsay dia aparitany be eto an-tany amin'izao nefa fantatrao fa 2000 taona lasa izay dia tsy nisy akory io teny io fa ny teny latina no niresahan'ny olona tany?
Faharoa raha hilaza ny negation ny frantsay dia "ne ... pas" no lazainy nefa raha ny tena taloha dia "ne" fotsiny tahaka ny "no" amin'ny espaniola sy italianina. Fa ny "pas" dia avy amin'ny hoe "pas" = dingana, amin'ny ne marche pas. Dia nataon'ny olona kilalao teny foana dia raikitra mihitsy.
Ny tiako ahatongavana dia ny fomba fijerin'ny mpahay teny manao hoe: misy ny fitsipi-pitenenana sintonin'ny amin'ny teny efa misy, ary misy ny fitsipi-pitenenana amboarina (ara-tsiantifika) araka ny tianao aseho eto. Ilay voaloha antsoiny hoe "grammaire descriptive" ary ilay faharoa dia hoe "grammaire prescriptive."
Ka raha hiverina isika amin'ny hoe misy dikany ve ny "iraika ambin'ny folo" dia misy tokoa. Raha misy paoma eo ka alainao ny folo, ary raha iray sisa ny ambiny dia "iraika ambin'ny folo" izany no isan'ny paoma teo. Tsy izao no namorona ny "iraika ambin'ny folo" fa fitenin'ny olona ilay izy ary anjaran'ny mpahay teny no mandinika hoe ahoana ny rafi-pitenenana ao anatin'io.
Ka raha izaho manokana dia izao. Tsy laviko hoe ilay ny manadihady sy mamelom-boho ny teny malagasy mba tsy ho foana tahaka ny teny latina izy any aoriana any. Fa kosa ny teny vao no tsara hifantohana mafy fa tsy ny teny efa fitenin'ny olona indray no esorina.
Nav - 16/11/2014 14:18
Misaotra nampatsiahy fa efa foana kosa angamba no izy. Ny teneniko fotsiny dia hoe ilay "toraka" dia teny ka mila tsipi-panohizana.
Oh: 10^8: folo tora-balo
Fa ilay 10^11 kosa tsy azoko hoe maninona no tsy folo torak'iraika ambin'ny folo?
1) Asiana tsipi-panohizana ve ohatra ny "Folo tora-balo" sa tsia? Raha ny ohatra 10^2: 10 toradroa dia tsy asiana satria efa teny raikitra io toy ny refim-belarana: m^2: metatra toradroa na koa 10^3: Folo toratelo: refina hadiry koa. Fa ho an'ny sisa manaraka ahoana? Ny ahy heveriko hoe tsy fampiasan'ny besinimaro matetika dia tsy natambatro ireo singan-teny fa dia navelako hisaraka toy ny amin'ny famaritana. 10^8: Folo atoraka im-balo= Folo toraka valo (Azo an-tsaina fa isa io, vakiana araky ny famaritana sy ny endrika fanoratana fanao @ matematika).
2) 11: Iraika ambin'ny folo sa Folo iraika? Ny lohatenin'ity adihevitra ity moa dia hoe: "Fandrafetana abidia ho an'ny teny malagasy" izay no tsy ahitana an'io fanontaniana io eto. Nataonao anefa ny fanontaniana ka dia valiana fohy hoe : 11: Folo iraika.
Fitsipika vaovao narosoko efa elaela ihany izay, niadiana hevitra naharitra teto TNR ary nifamaliana sy nifanjevo mihitsy aza ireo olona sy manampahaizana maro. Ny nahatonga aho handroso io fitsipika vaovao io dia ny fandrenesako voalohany ny fiteny tandroy miteny hoe: 350: Telonjato limiampolo (Telonjato dimampolo io), 30 na 35 taona lasa izay ary tonga dia nihevitra aho fa MARINA ny fomba fanisana tandroy ary DISO ny fomba fanisana merina. Taty aoriana dia voaporofo @ fomba siantifika ny fahamarinan'ny voalazako.
Tsy maintsy @ fomba siantifika no hamaliana sy hanohanana ny hevitra fa tsy mety ny fanaporofoana omen'ny sasany hoe io no mahazatra (ilay Iraika ambin'ny folo) ka hanova hitondra fahasahiranana ve?
Tsy marina koa ny fanohanan-kevitra hoe io no fomban-drazana: voaporofo eo @ tantaran'ny teny malagasy fa vao 180 taona eo ho eo no nampiasana io fomba io teto Imerina sy teo @ Fanjakana, taloha tamin'ny andron'Andrianampoinimerina (1800 tany ho any), izany hoe 200 taona lasa sy taloha dia nanisa Folo iraika amby/b] ny Mpanjaka sy ny mponina rehetra teto Madagasikara, na i Andrianampoinimerina aza.
Raha fehezina dia tokony hanova ny fomba fanisany ny teny malagasy ankehitriny ka tsy hiteny hoe:
11: Iraika ambin'ny folo
fa HITENY hoe:
11: Folo iraika (na: Folo iraika amby saingy iry voalohany no tsara, tsotra ary hentitra: Folo iraika).
Sendra nandalo ka misy vaovao tsara ampitaina aminareo, toa efa nolazaiko teto @ forum fa toeran-kafa na izany aza mamerina indroa manana ny antitra, hoy ny fitenenana.
Efa nivoky ny lahatsoratra FANDRAFETANA ABIDIA HO AN'NY TENY MALAGASY ao @
Bulletin de l'Acadmie Malgache, Tome XCIII/1 Janvier-Juin 2013.
Azo jerena ao amin'y Akademia Malagasy, Tsimbazaza, Antananarivo ary ampirisihina ianareo izay te hiady hevitra hamaky an'io.
Ho anareo eto @ forum dia tsara ny mamaky an'io satria io no manome feno ny lalan-kevitra nitondrako ny fanadihadiana sy nanomezana ny vahaolana.
Izaho manao fanamby aminareo rehetra fa marim-pototra tsy azo kianina ny fomba fanjohin-kevitra nampiasaiko tao, @ fomba 2: i) Araky ny lalanan'ny gramera/fonetika izay tsy azo kianina fa "universel" ary ii) Araky ny matematika, mampiasa ny Aljebry ny Vondrona izay manome vokatra mitovy tanteraka @ fitsipiky ny gramera.
NOHO IZANY, FANAPAHAN-KEVITRA POLITIKA SISA NO ATAON'NY FANJAKANA ary izao ataoko izao dia manomana ny lobbying ho @ izany, manomboka ao @ Akademia ary manaraka izao ataoko eto @ forum serasera izao.
Nav - 01/01/2015 18:16
Momba ny lohateny "Fandrefetana abidia ho an'ny teny malagasy".
Efa maro ary lava ny lahatsoratra momba io lohateny io etsy ambony ary na ny tena aza dia toa nanadinodino ny fisiany teto satria any @ toerana hafa koa eto @ forum (oh: Fanabeazana na Kolotsaina) dia efa noresahina koa io.
Ny holazaina eto, ato anatin'ny lohateny indrindra dia ny fivoahan'ny lahatsoratra ao @ revion'ny Akademia Malagasy efa t@ volana May na Jona 2014 tany ho any ary aseho aminareo eto mba hahafahanareo mandinika milamina ny votoatin'ny tolokevitra.
Indro àry ny fanondroana io loharano io:
Fandrafetana abidia ho an'ny teny malagasy
in Bulletin de l'Académie Malagasy, Tome XCIII/1, Janvier-Juin 2013
Akademia Malagasy, Antananarivo
Tel: 020 22 210 84
Nav - 17/02/2015 16:13
Sendra nandalo teto amin'ny forum ka manoratra indray ho an'ny rehetra nandray anjara tamin'ity lohateny ity:
i) Momba ny lohateny "Fandrafetana abidia ho an'ny teny malagasy". Toa tsy tandrintandriko amin'ny valinteny etsy ambony, ny daty koa toa somary efa taloha ihany fa dia averiko eto ny vaovao toa tsy voalaza eto koa (raha efa voalaza moa dia ny mamerina indroa manana ny antitra, hoy ny fitenenana):
Efa nivoaka ny Revion'ny Akademia Malagasy misy ny lahatsoratro momba io lohateny io: FANDRAFETANA ABIDIA HO AN'NY TENY MALAGASY, in Bull. Acad Natl des Arts, Lett et Sciences, Tome XCIII/1, Janvier-Juin 2014, Akademia Malagasy Antananarivo, io moa ilay velakevitra nataoko tamin'ny 2 taona lasa tamin'ny 2013 nandritra ny "Andro Iraisam-pirenena UNESCO momba ny tenindreny 21 Febroary".
Ao anatin'io lahatsoratra io no ahitanareo ny fanazavana, heveriko fa feno momba io tolokevitro io.
Niverenako nentiko amin'ny endrika hafa moa ilay hevitra vao tamin'ity taona 2015 ity, nampitondraina ny lohateny hoe: MIANATRA MAMAKY TENY SY MANORATRA ARY MIANATRA MANISA ka azo iadiana hevitra indray aoriana.
ii) Momba ny fomba fanisana: ny fotokevitra sy ny porofo matematika moa efa fantatrareo fa ny vaovao dia nalefako tao amin'ny facebook vao tamin'ity fiandohan'ny taona 2015 ity koa: nafana ny adihevitra sy fifanakalozan-kevitra ary ny fanazavana.
Ny ataoko ankehitriny amin'ireo lohateny 2 lahibe ireo dia ny hikaroka handresy lahatra ny Fanjakana (na dia fantatrareo aza fa mety tsy dia ao anatin'ny lohan-dry zareo angamba itony raharaha itony), ny porofo ny ahy dia miha matevina isan'andro isan'andro ny maha marim-pototra ireo lalan-kevitra ireo, MARINA AMIN'NY LAFINY SIANTIFIKA = MAHOMBY EO FIAINANA ANDAVANANDRO = MAHOMBY EO AMIN'NY ASA AMAN-DRAHARAHA.
Noho izany, tsy hevitra misavoana akory no arosoko eto fa hevitra misy vokatra pratika ho an'ny sehatra rehetra ary vokatra maharitra ho an'ny taranaka, manomboka amin'ny ankizy mpianatra madinika Garabola T1-T2, izany no nahatonga ny lohateny hoe: "Mianatra mamaky teny sy manoratra ary Mianatra manisa".